युवाहरुको भविष्य सुनिश्चित गर्न उमेदवारी - Headline Nepal - Online News Portal from Nepal | Latest Nepal News from politics, sports, entertainment, society, world, technology, opinion, interview, Nepali movies, fashion, life style, tourism, international news, national news, economy, science, music, live news events, live sports events
युवाहरुको भविष्य सुनिश्चित गर्न उमेदवारी
Posted by Headline Nepal | ४ आश्विन २०७३, मंगलवार १८:०८ |
लामो समय देखि नेपाली राजनीतिमा सक्रिय रहंदै नेपाली कांग्रेसको सशक्त भातृ संगठन तरुन दलको चौथो महाधिवेशनमा अध्यक्षका प्रत्यासीका रुपमा बलियो प्रतिस्पर्धी स्वरुप आफूलाई प्रस्तुत गरिरहेका हर्क बहादुर देउवासँग हेडलाईन नेपालले गरेको कुराकानी ।
अहिले व्यापक रुपमा महाधिवेशनको तयारी भइरहेको छ । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले आफू पार्टी सभापति भएको छ महिना भित्रमा सम्पूर्ण भ्रातृ संगठनको महाधिवेशन गर्छु भन्नु भएको थियो । त्यही अनुरुप नेपाल तरुन दलले आफ्नो तयारी गरिरहेको छ । केही जिल्लामा अहिले महाधिवेशन हुन बाँकी छ, मलाई लाग्छ केही दिन भित्रमा त्यो पनि सम्पन्न हुन्छ र महाधिवेशनको प्रक्रियाको थालनी हुनेछ । हाम्रो महाधिवेशन पोखरामा हुन गहिरहेको छ , त्यसको तयारी स्वरुप हामीले महाधिवेशन प्रतिनिधिका लागि होटलहरु बुकिङ गरिरहेका छौं । ९५ प्रतिशत महाधिवेशनको तयारी पूरा भईसकेको छ ।
तपाईको उमेदवारी केमा हुदैछ र किन ?
नेपाल तरुण दलको केन्द्रिय अध्यक्षमा मेरो उमेदवारी रहनेछ । नेपालका सम्पूर्ण पार्टीहरु मिलेर नयाँ संविधान निर्माण भएको छ । संविधान कार्यान्वयन मुख्य चुनौतीको रुपमा रहेको छ । यदि म अध्यक्ष भएको खण्डमा संविधान कार्यान्वयन गर्न नेपाल तरुन दलले मुख्य भूमिका खेल्ने छ । संविधानको विरोधमा तराई, हिमाल, पहाडमा र जात, धर्मका मानिसहरुमा केही असन्तुष्टीको आवाज उठेको छ । संविधान परिवर्तनशील छ, आधुनिक छ, त्रृटीहरु हुन सक्छन् त्यसलाई सच्याउन सकिन्छ । त्यसका लागि सबै राजनीतिक दलहरु मिलेर जान आवश्यक छ । राजनीतिक सहिष्णुताको विकाश गर्नु पर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । किनभने एउटै व्यक्तिले , एउटै पार्टीले मात्र चाहेर हुंदैन । बहुदल नभइकन लोकतन्त्र हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । एउटा लोकतान्त्रिक पार्टी भित्र प्यानल हुदैन भने त्यो लोकतान्त्रिक पार्टी हुन सक्दैन । नेपाललाई अगाडि बढाउनका लागि, गरिबी हटाउनका लागि, युवाहरुको आस्थाको केन्द्रबिन्दु बनाउनका लागि म काम गर्छु । अहिले संसारमा नेपालको शैक्षिक सर्टिफिकेट बिक्दैन । नेपालको पासपोर्टलाई अवहेलना गरिन्छ । सर्टिफिकेट र पासपोर्टको महत्व बढाउनका लागि सशक्त तरुन दल हुनुपर्छ, समाज परिवर्तनका लागि तरुण दलको महत्वपूर्ण भूमिका हुनुपर्छ । राजनीतिक क्रान्ति सकिसकेको अवस्था छ, अब आर्थिक क्रान्ति तिर लाग्नु पर्छ । सम्पूर्ण नेपालीले मेरो देश हो, म गर्बका साथ मेरो देशमा बस्छु र यहाँ अवसर छ भन्ने अनुभुति गर्ने तर्फ नेपाल निर्माण गर्न हामी लाग्नु पर्छ । सबै पक्षलाई यसमा लाग्ने वातावरण सिर्जना गर्नका लागि तरुन दलमा मेरो अध्यक्ष पदमा उमेदवारी रहने छ ।
लामो समय देखि भूमिका विहिन देखिएको संगठनलाई कसरी ब्युँझाउन सक्नु हुन्छ ?
२०५४ सालमा बालकृष्ण खाँण दाइले विखण्डन भएको तरुन दललाई ब्युताउने काम गर्नुभयो । त्यस समयमा तरुन दलको अवस्था एकदमै राम्रो थियो । विगत केहि समय देखि तरुन दल भूमिका बिहिन भएको हामी सबैले महशुस गरेका छौं । मैले विगत २६ वर्षदेखि विद्यार्थी राजनीतिबाट राजनीतिक जीवन सुरु गरेको हुँ । मेरो अनुभव, विज्ञतालाई तरुन दलमा कूशल नेतृत्व प्रदान गर्न प्रयोग गर्नेछु । तरुन दललाई सशक्त बनाउनका लागि पनि राजनीतिक रुपमा खारिएर आएको व्यक्तित्वको आवश्यकता रहेको छ । नेपाली समाजलाई, नेपाली राजनीतिलाई बूझेको व्यक्ति आउनु पर्छ । जहाँ सम्म नेपाल तरुन दलको नेतृत्व मेरो हातमा आएको खण्डमा दुई वर्ष भित्रमा निकै ठूलो परिवर्तनका लागि मसंग योजना र विचारहरु छन् । नेपालमा वैचारिक रुपमा भिन्न पार्टीहरु र विचारका साथीहरु हुनुहुन्छ । नेपाल तरुन दलले राजनीति गर्ने नयाँ संस्कारको विकास गर्नेछ ।
पार्टी भित्र पनि विभिन्न धारहरु छन्, त्यो भन्दा माथि उठेर तरुन दलमा सबैको नेतृत्व देख्न सकिन्छ कि सकिदैन ?
लोकतान्त्रिक पार्टीमा प्यानल हुन्छ । प्यानल नभएको पार्टीलाई लोकतान्त्रिक पार्टी भन्न मिल्दैन । पार्टीलाई सशक्त बनाएर लानका लागि प्यानलको पनि आवश्यकता पर्छ । पार्टी सिद्धान्त अनुसार चल्ने हो, नेतृत्व एउटाले लिने हो ।
अन्त्यमा, मतदाताहरुलाई के भन्नुहुन्छ ?
सम्पूर्ण तरुन मित्रहरुलाई, युवा साथीहरुलाई धेरै लामो समयपछि नेपाल तरुन दलको महाधिवेशन हुन गइरहेको सन्दर्भमा मतको मूल्य बुझेर मात्र आफ्नो मत जाहेर गर्नुस भन्न चाहन्छु । तपाईहरुको विचारको, भावनाको कदर गर्न सक्ने व्यक्तिलाई आफ्नो अमूल्य भोट दिनुहोला । विगतका गलत कुराहरुलाई त्यागेर सही राजनीतिक संस्कारको विकासका लागि अहिलेको तरुण दलको महाधिवेशन हुन गइरहेको छ । आउनुहोस् सबै मिलेर पार्टी, तरुन शक्ति र देश बनाऔं ।
Previousलैङ्गिक समानता अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन असोज ६ र ७ गते काठमाडौँमा
Nextप्रधानमन्त्रीबाटै मधेसको समस्या समाधान हुने : यादव
तीन दिन को पाउना जत्ता सुक्कै जा
८ पुष २०७१, मंगलवार १४:३९
भुषाललाई नेता राईको प्रश्न : जबज क्रान्ति पछिकै लागि निर्माण गरियो भने क्रान्ति लगत्तै यो कसरी क्लोज हुन्छ ?
२३ पुष २०७४, आईतवार १८:२७
मोर्चाले मधेसी जनताको माग पुरा गर्ने बचन दिएको छ,विचैमा सरकारमा जाने कुरा सम्भव छैन : महतो
२५ श्रावण २०७३, मंगलवार २०:०९
‘नयाँ मुद्धा र नयाँ नेतृत्वसँगै अब नयाँ अखिल’
२६ माघ २०७२, मंगलवार ०३:२९